नेपालमा #MeToo: सुझ्नु न बुझ्नु, तुलिगाँडा पुज्नु – बाह्रथरी कुरा
नेपालमा #MeToo: सुझ्नु न बुझ्नु, तुलिगाँडा पुज्नु
November 5, 2018 By Boston बाह्र सत्ताईस कुरा
पहिला चैं लामो समय हातमा दही जमाएर बसेकोमा हामी क्षमाप्रार्थी छौं।
नमस्कार छ है इष्टमित्रहरु ! सन्चै नाम्रै हुनुला के रे। सन्चो छैन भने चैं यसरी इन्टरनेट खोलेर ताइँ न तुइँका दुईपैसे लेख पढेर नबस्नुहोला। डाक्टरलाई देखाएर ओखति खाएर सुत्नुहोला। अँ, डाक्टर देखाम्दा दाँत, गाला वा आँखा चेक गर्दा हात काम्छ भनेर हात चैं तपैंको छातीमा अड्याएर जाँच गर्ने डाक्टरसँग सतर्क हुनुहोला 😛 वा पेट जाँच्दा छातिसम्म उदाङ्गो बाउन लाएर पेन्टको जीपरतिर कुहिनो घोट्ने डाक्टर्नीहरुसँग पनि सतर्क रहनुस्। कथम्‌कदाचित डाक्टर डाक्टर्नीले त्यस्तो गरिहालेमा #मिटु भन्न नभुल्नुहोला। यति सावधानी गराएपछि आउनुस् आजको बिषयवस्तुतिर अगाडि बढौं।
सन् २००६ मा पहिलोपटक प्रयोगमा आएको तर सन् २०१७ बाट एकाएक पश्चिमि बजारमा उग्र भएको #मिटु अभियान भारत हुँदै नेपालसम्म पनि आइपुगेको छ। पश्चिमाहरुले उत्पादन गरेको कुरा प्रयोग गर्न पनि पहिला भारतलाई नै कुर्नुपर्ने हाम्रो बानी मिटु अभियानमा पनि दोहोरियो। नत्र २०१७ को अक्टोबरदेखि सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट देखिएको, पश्चिमा समाचारहरुमा ‘हट टपिक्स’ बनेको, मैं हुँ भन्नेहरुको समेत धोती खुस्काएको मिटु अभियान नेपाल भित्रिन भारतीय अभिनेता, निर्देशक, पत्रकारहरुमाथि दोष लागुन्जेल कुर्नुपर्थेन। कुनै कुनै कुरा त सिधै पश्चिमाबाट कपि गर्दा नि हुने हो के रे। खैर ! लगभग १ बर्ष लगाएर भएपनि अम्रिकाबाट मिटु नेपाल आइपुगो। यसमा खुशी हुने कि दु:खी भन्नेबारे चैं १२ थरी टीम नै दोधारमा छ। खुशी यसमानेमा कि, अब नेपालका मैं हुँ भन्नेहरु पनि सेक्सुअल हर्‍यासमेन्टमा जाकिने भए भनेर। दु:खी यसमानेमा कि, कतै हामी आफै पनि पो परिएला कि भनेर 😀
अब नेपालमा मिटुकाबारे कुरा गरौं।
जो चोर उसकै ठूलो स्वर
नेपाल र भारतजस्तो पुरुषप्रधान संस्कृति भएको समाज, महिलालाई दबाएर राख्नुलाई पुरुषार्थ ठानिने समाजमा सेक्सुअल्ल हर्‍यासमेन्टमा नपरेका महिला कमै होलान्, अथवा यसलाई यसरी पनि भनौं: नेपालमा महिलालाई यौन दासी ठानेर हर्‍यास् नगरेका ‘नामर्द पुरुष’ भेट्न गाह्रै होला। अब कसैले आफूलाई आफैलाई ‘नामर्द’ घोषणा गर्‍यो भने त हामी रामराम भन्ने त होला। बाटो र चोकमा बसेर छोराले युवती जिस्काएको देखेर बाबुले स्याबासी दिने समाज हो हाम्रो। हाम्रो नेपाल संसारकै अजीब देश हो नि फेरि। यहाँ महिलालाई सबैभन्दा बढी हर्‍यास गरेको पुरुष यस्ता अभियानको अग्रपंक्तिमा देखिन्छन्। ट्विटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालमै पनि हेर्नुभए हुन्छ, तपैं हामीले नै सुनेका, अनुभव गरेका वा कतिले त भोगेका पनि होलान्: ‘फलानीलाई यसो गरो रे, अफिसकै लिफ्टमा समात्यो रे, नगरकोट लिएर गयो रे, प्रमोशन गर्दिन्छु भनेर बैंकक लिएर गयो रे’ भनेर सुनिएका मान्छेहरु यतिखेर मिटु अभियान अब शुरु हुनुपर्छ, लुकेका कथा बाहिर आउनुपर्छ भन्दै उफ्रेका भेटाउन सकिन्छ। दुई महिनाजति अघि रौतहटमा हो क्यारे, आफैले एसिड छ्यापेर शंका गर्छन् भनेर अस्पतालमा आफै कुरुवा बसेको घट्ना। कतिपय पुरुषहरु ठ्याक्कै यसै गर्छन् यो मिटु अभियानमा पनि।
आफ्नो कथा दराजमा, अर्काको कथा बजारमा
मिटु अभियान बढ्दै जाँदा देखिँदै गइनेछ, सबैभन्दा धेरैजनाबाट हर्‍यास भएकी महिला चैं आफ्ना हर्‍यासमेन्टका कथा दराजभित्र लुकाएर ‘यस्ता घट्ना बाहिर ल्याउनुपर्छ’ भन्दै अरुलाई उकासिरहेका भेटिन्छन्। अँ, बोल्नुपर्छ। अहिले नबोले कहिले बोल्ने? हामी कहिलेसम्म अन्याय सहने? भनेर एकथरी महिलाहरु बुर्कुसी मारिरहन्छन्। तर उनीहरुले आफूले भोगेको हर्‍यासमेन्टको कथा ज्यान गए खोल्दैनन्। यिनीहरुले भन्ने आफ्ना कथा चैं, आज बाटोमा दुईटा केटाले ‘अोहो, कालो जिन्समा त कस्तो राम्री देखिएकी भनेर हर्‍यास् गर्‍यो’ भन्ने टाइपका हुन्छन्। अरुले हर्‍यासमेन्टको घट्नाबारे भन्दा पिडकको नाम नभनेमा यिनीहरु पीडितलाई उकास्न थाल्छन्: त्यस्ता पिडकको नाम नै लेखुम्, ताकि अरु बचुन्। छक्क पड्ता है, यी आफैले आफ्नो कथा भने भने पिडकको नाम मरे भन्दैनन्। सारै जिद्दि गरेमा, म असुरक्षित हुन्छु भन्नेसम्मका बहाना बनाउँछन्।
जो होचो उसकै मुखमा घोचो
माथि नै लेखियो। नेपाली समाजमा यौनको मामलामा महिलालाई नै दोषी देखिइन्छ। कोही युवतीले मलाई फलानोले यसो गरो भनिन् भने गाउँका महिलादेखि पुरुषसम्म एक मुख लागेर ती युवतीकै विरुद्ध लाग्छन्। सबले एक एक कथा नै शुरु गर्छन्। ‘त्यो केटी नै त्यस्तै छे। मैले अस्ति पल्ला गाउँको खड्काको छोरोसँग चौतारामा देखेकी थिएँ।’ ‘ए त्यो केटी? त्यो त अस्ति केटाहरुसँग डिस्को पनि गएकी थिए रे। चुरोट, रक्सी सब खान्छे। केटी नै त्यस्ती नभै केटाले हिम्मत गर्दैनन् के। खै त, हामीलाई कोही समाउन आएका छैनन् त।’ गाउँ होस् या शहर, यस्ता कुरा सामान्य हुन्। कोही महिलाले हिम्मत गरेर आफूमाथि भएको अत्याचारको घट्ना सुनाउँदा भोग्ने नियति यही हो।
अर्कोलाई सकाउने दाऊ
पाठकहरु कतिले बिर्सिनु भयो कि याद छ? कान्तिपुर दैनिकका पत्रकार विकास थापामाथि लागेको यौन शोषणको मुद्दाका बारेमा? अहिले उनीमाथिको आरोप अदालतले गलत ठहराएको छ। उनले यो मुद्दामा सफाई पाएका छन्। तर याद गरौं त, त्योबेलाको कान्तिपुर ग्रुप विकास थापाविरुद्ध कसरी लागेको थियो? सम्पादकदेखि प्रकाशकसम्म, वरिष्ठ रिपोर्टरदेखि पिउनसम्म, सबै विकास थापालाई यौन दुराचारी बनाउन लागिपरेका थिए। उनका र महिला रिपोर्टरका बीचका ईमेल संवाद भन्दै कथा दिनदिनै आउँथे। तर परिणाम के आयो? उनी निर्दोष साबित भए। कान्तिपुरले उनलाई क्षतिपुर्ति तिर्‍यो। तर उनको इज्जतको फलुदा बनाइदियो। विकास थापामाथि दोष लगाउने रिपोर्टर कहाँ पुगिन् त अहिले? कसैलाई चासै छैन।
यो नेपाल हो, नेपालमा हुन्छ, के हुन्छ त भन्दा मौका छोप्ने काम हुन्छ। यस्ता अभियानहरु आउँदा हाम्रोजस्तो समाजमा अर्को डरलाग्दो कुरो चैं ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’ भन्ने शैली हो। आफ्नो सर परुन्जेल समझदारी र स्वार्थ पुरा भएपछि जबर्जस्ती भन्ने प्रवृत्ति पनि डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। मिटु भनेको के हो? कुन अवस्थामा मिटु हुन्छ? कुन अवस्थामा मिटु हुँदैन भन्ने सामान्य जानकारी नराखि रिसइबी साँध्ने जमात पनि भेटिएलान्। यस्तोमा चैं ब्रेकअप भएका जोडी पहिलो नम्बरमा पर्छन् होला।
मिटु- अ जोक
भारतमा मिटु अभियानले बजार पिटेपछि नेपाली टेलिभिजनका केही शोहरुमा मिटुलाई जोक बनाएको त याद गर्नुभयो होला। अनि जोक बनाउनेमा पुरुषमात्र हैन आफूलाई शिक्षित, पढेका, जानेका भन्ने नायिकाहरु पनि अगाडि नै देखिए। चाहे नेपाल आइडलमा रिमा विश्वकर्मामाथिको जोक होस् वा धमलाको हमलामा रेखा थापाको- उनीहरुले मिटु अभियानलाई फगत एउटा जोक हो। अनुहार नपरेका, आफ्नो पेशामा असफल भएका, काम नपाएका, डलर खेती गर्नेहरुको धन्दा हो भन्ने ठान्छन् यस्ताले मिटुलाई। यी दुईटा घटनालाई हेर्ने हो भने नेपालमा या त मिटुको बारेमा ज्ञान भएका सेलिब्रेटी नै छैनन् या त उनीहरु यो मुभमेन्टलाई साँच्चै नै जोक मात्रै ठान्छन्।
सुझी न बुझी, चम्किन्छ *जी
नेपालीका लागि मिटु सुझ्नु न बुझ्नु टुँडिखेलमा कुद्नु भनेजस्तै भइरहेको छ। मिटु अभियान के हो? कस्तो अवस्थामा मिटु हुन्छ भन्नेसम्मको थोप्पो ज्ञान छैन तर मिटु भन्दै उफ्रिने नि छन् एकथरी। यिनीहरुका लागि ट्विटर, भाइबर, म्यासेन्जर वा एसएमएस डिएम गरेर ‘तिमी राम्री लाग्यो’ भन्यो भने पनि मिटु हुन्छ। तर मिटुको गुदीले भन्छ, कसैको इच्छा विपरित, जबर्जस्ति पछि लागेको लाग्यै गर्नु चैं मिटु हो। कसैलाई यौन प्रस्ताव राख्नु मिटु हैन तर एकपटक ‘नाइँ’ भनिसकेपछि पनि लित्ति कसेर लाग्नु चैं मिटु हो। तर यहाँ त प्रेम प्रस्ताव राखेकै आधारमा पनि मिटु लाइदेलान् भन्ने डर छ।
र, अन्त्यमा, मिटु अभियानको नेपाल च्याप्टरमा मिटुको पहिलो शिकार बनेकामा पुर्व मेयर तथा पुर्व प्रदेश मन्त्री स्थापितप्रति हाम्रो सहानुभूति छ 😏
माथि जे जे लेखिएको भएतापनि अम्रिकी वा बलिउडी वा नेपाली, जहाँको अभियान, कथा हेरे पनि मिटुको पिषक हुन चैं ठूलो र नाम चलेकै मान्छे हुनुपर्ने र,छ। त्यसैले १२ थरी परिवार तपैंहरु सबैलाई ठूलो र असल मान्छे बन्न तर मिटुको पिडक हुनेगरिको ठूलो मान्छे नबन्न हार्दिक चेतावनी दिन चाहन्छ।
बाह्र सत्ताईस अभियन्ताहरू